အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့ Covid - 19 ဆေးစစ်ချက်အဖြေ Negative ထွက်ရှိ - Cele Connections
နိုင်ငံကျော် Rock အဆိုတော်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်ဟာ Covid – 19 ကူးစက်ခံရသူ လူနာနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေခဲ့တာကြောင့် သူ့သဘော ဆန္ဒအလျောက် Quarantine (21) ရက်ဝင်ပြီး ဆေးစစ်မှု ခံယူထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့တကွ ပရိသတ်တွေ အားလုံးက စိတ်ပူနေကြတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့သိရတဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေမှာတော့ ဇ်ာဝင်းထွဋ်ဟာ Covid – 19 ရောဂါပိုးမရှိကြောင့် အဖြေထွက်လာကြောင်း သမီးဖြစ်သူ ဝင်းထွဋ်တာရာက ပြောပြထားပါတယ်။
“မနေ့ မနက်က လာစစ်ပေးသွားတယ်ဆိုကတည်းက တစ်အိမ်လုံး ရင်ခုန်နေကြတာ။ အထုတ်ပဲ ပြင်ထားရမလိုလို၊ ထိုင်ရမလို၊ ထရမလို၊ ရယ်ချင်သလိုလို၊ အိမ်သာပဲ ဝင်ချင်သလိုလိုနဲ့။ နှစ်နဲ့ချီကြာသလို ခံစားရတဲ့ တစ်ရက်ပဲ! MOHS page ကို Refresh ရတာလဲ သေမလိုပဲ။ ခုမှပဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ တစ်ဆောင်လုံး Negative တဲ့။ စိတ်ပူပေးကြတဲ့၊ ဝိုင်းဆုတောင်းပေးကြတဲ့၊ ကူညီပေးကြတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖခင်အကြောင်းကို ဝမ်းသာစွာ ပြောထားပါတယ်။
ဇော်ဝင်းထွဋ်ကတော့ Covid – 19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိတာကြောင့် မကြာခင်အချိန်အတွင်း အိမ်ပြန်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ သတင်းကောင်းအတွက် ဝမ်းသာနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
အဆိုတျော ဇျောဝငျးထှဋျ ရဲ့ Covid – 19 ဆေးစဈခကျြအဖွေ Negative ထှကျရှိ
နိုငျငံကြျော Rock အဆိုတျောကွီး ဇျောဝငျးထှဋျဟာ Covid – 19 ကူးစကျခံရသူ လူနာနဲ့ နီးနီးကပျကပျရှိနခေဲ့တာကွောငျ့ သူ့သဘော ဆန်ဒအလြောကျ Quarantine (21) ရကျဝငျပွီး ဆေးစဈမှု ခံယူထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇျောဝငျးထှဋျရဲ့ မိသားစုတှနေဲ့တကှ ပရိသတျတှေ အားလုံးက စိတျပူနကွေတာဖွဈပွီး ဒီနသေိ့ရတဲ့ ဆေးစဈခကျြအဖွမှောတော့ ဇျာဝငျးထှဋျဟာ Covid – 19 ရောဂါပိုးမရှိကွောငျ့ အဖွထှေကျလာကွောငျး သမီးဖွဈသူ ဝငျးထှဋျတာရာက ပွောပွထားပါတယျ။
“မနေ့ မနကျက လာစဈပေးသှားတယျဆိုကတညျးက တဈအိမျလုံး ရငျခုနျနကွေတာ။ အထုတျပဲ ပွငျထားရမလိုလို၊ ထိုငျရမလို၊ ထရမလို၊ ရယျခငျြသလိုလို၊ အိမျသာပဲ ဝငျခငျြသလိုလိုနဲ့။ နှဈနဲ့ခြီကွာသလို ခံစားရတဲ့ တဈရကျပဲ! MOHS page ကို Refresh ရတာလဲ သမေလိုပဲ။ ခုမှပဲ သကျပွငျးခနြိုငျတော့တယျ။ တဈဆောငျလုံး Negative တဲ့။ စိတျပူပေးကွတဲ့၊ ဝိုငျးဆုတောငျးပေးကွတဲ့၊ ကူညီပေးကွတဲ့သူတှေ အားလုံးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖခငျအကွောငျးကို ဝမျးသာစှာ ပွောထားပါတယျ။
ဇျောဝငျးထှဋျကတော့ Covid – 19 ရောဂါပိုး ကူးစကျခံရခွငျးမရှိတာကွောငျ့ မကွာခငျအခြိနျအတှငျး အိမျပွနျရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဇျောဝငျးထှဋျရဲ့ သတငျးကောငျးအတှကျ ဝမျးသာနကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ကယ်ရီကေးချားပန်းချီကားကို ငွေကျပ်(၁၀)သိန်းနဲ့ လေလံတင်ရောင်းချပြီး ထူးအိမ်သင်ရဲ့သမီး မိကွန်ထောဆီကို ပေးအပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မောင်မောင်အေး
သူများအကြောင်း စိတ်မဝင်စားလို့ ဘာတစ်ခုမှ မပြောခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ သည်းမခံနိုင်လို့ ပြောရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ခြူးလေး